Etu esi lelee anya, nyochaa, ma mezie njikọ ndị mebiri emebi na WordPress | Martech Zone
Etu esi lelee anya, nyochaa, ma mezie njikọ ndị mebiri emebi na WordPress
Martech Zone agabigala otutu iterations kemgbe bidoro na 2005. Anyị agbanweela ngalaba anyị, kwaga saịtị ahụ ndị ọbịa ọhụrụ, ma degharịa ya ọtụtụ ugboro.
E nwere ugbu a ihe karịrị 5,000 isiokwu ebe a na ihe fọrọ nke nta 10,000 kwuru na saịtị. Idebe saịtị ahụ nke ọma maka ndị ọbịa anyị na maka injin nchọta n’oge ahụ abụwo ihe ịma aka. Otu n’ime nsogbu ndị ahụ bụ ileba anya na imezi njikọ mebiri emebi.
Njikọ ezughị oke dị egwu - ọ bụghị naanị site na ahụmịhe onye ọbịa na nkụda mmụọ nke ịhụghị mgbasa ozi, inwe ike igwu vidiyo ahụ, ma ọ bụ nyefee ya na peeji 404 ma ọ bụ ngalaba nwụrụ anwụ… mana ha na-egosipụtaghị nke ọma na saịtị gị ma nwee ike imerụ ọchụchọ gị ikike engine.
Etu otu saịtị gi si mebi njikọ
Inweta njikọ mebiri emebi bụ ihe a na-ahụkarị na saịtị. Enwere ọtụtụ ụzọ ọ ga - esi mee - na ha ga - enyocha ma dozie ha niile:
Na-akwaga na ngalaba ọhụrụ - Ọ bụrụ na ị kwaga na ngalaba ọhụrụ ma ghara idozi rediregharị gị nke ọma, njikọ ochie na ibe na ibe gị ga-ada.
Na-emelite usoro permalink gị - Mgbe mbụ m bipụtara saịtị m, anyị na-etinye afọ, ọnwa, na ụbọchị na URLs anyị. Ewepụrụ m nke ahụ n'ihi na ọ dere ọdịnaya ahụ ma nwee ike nwee mmetụta dị njọ na ogo nke ibe ndị ahụ n'ihi na igwe na-achọkarị ihe banyere usoro ndekọ dị ka mkpa otu isiokwu.
Ebe nrụọrụ mpụga na-agwụ ma ọ bụ ghara ibugharị - Ebe ọ bụ na m na-ede banyere ngwaọrụ ndị dị na mpụga ma na-eme nchọpụta, enwere ihe egwu na azụmaahịa ndị ahụ ga-aga, nweta ha, ma ọ bụ nwee ike ịgbanwe usoro nke saịtị ha na-enweghị ịgbanye njikọ ha nke ọma.
E wepụrụ Media - njikọ ihe ntanetị nke nwere ike ghara ịdị na-ewepụta oghere na ibe ma ọ bụ vidiyo nwụrụ anwụ nke m tinyere na ibe na posts.
Ikwu Links - nkọwa sitere na blọọgụ onwe onye na ọrụ ndị na-adịkwaghị adị juru ebe niile.
Ọ bụ ezie na ngwa nchọta na-enwekarị crawler nke na-egosipụta nsogbu ndị a na saịtị, ọ naghị eme ka ọ dịkwuo mfe ịchọpụta njikọ ma ọ bụ mgbasa ozi na-emehie ma banye ma dozie ya. Toolsfọdụ ngwaọrụ na-arụ ọrụ dị egwu nke na-esote redire ziri ezi.
Na-ekele, ndị folks na WPMU na Jikwaa WP - ụlọ ọrụ nkwado abụọ na - akwadoghị WordPress - mepụtara nnukwu ngwa mgbakwunye WordPress n'efu na - arụ ọrụ na - enweghị nsogbu iji kpachara anya ma nye gị ngwaọrụ njikwa iji melite njikọ gị na mgbasa ozi mebiri emebi.
Onye nyocha WordPress Broken njikọ
The Broken Link Checker ngwa mgbakwunye emepụtara nke ọma ma dịkwa mfe iji, na-achọpụta njikọ njikọ gị, mpụga, na nke mgbasa ozi na-enweghị oke oke akụ (nke dị oke mkpa). Enwere ọtụtụ nhọrọ ntọala nwere ike inyere gị aka - site na oge ole ha kwesịrị ịlele, oge ole ịlele njikọ ọ bụla, ụdị mgbasa ozi ịlele, yana ọbụlagodi onye ekwesịrị ịdọ aka ná ntị.
Nwere ike ijikọ Youtube API iji nyochaa listi ọkpụkpọ na vidiyo Youtube. Nke a bụ ihe pụrụ iche nke ọtụtụ ndị na-awagharị na-atụ uche n'ezie.
Nsonaazụ bụ dashboard dị mfe iji njikọ gị niile, njikọ ndị agbajiri, njikọ na ịdọ aka na ntị, na redirects. The dashboard na-enye gị ozi ma ọ bụ peeji, post, ikwu, ma ọ bụ ụdị ọdịnaya ndị ọzọ ka njikọ ahụ agbakwunyere. Kasị mma, ị nwere ike ịrụzi njikọ ahụ ozugbo ahụ!
Nke a bụ ngwa mgbakwunye pụtara ìhè na ihe ga - enwerịrị saịtị WordPress ọ bụla chọrọ ịnye ahụmịhe onye ọrụ kachasị elu yana iji bulie saịtị ha maka nsonaazụ ọchụchọ kachasị. Maka nke a, anyị etinyela ya na ndepụta anyị kacha mma WordPress plugins!
Onye nyocha WordPress Broken njikọ Ngwaọrụ WordPress kacha mma maka azụmaahịa
Tags: kasị mma wordpress pluginsgbajiri njikọ mataonye nlekota onye nlekotalelee njikọ agbajirinkwarụ njikọnjikọjikwaa njikọ gbajiri agbajinyochaa njikọ agbajiriihe nlele vidiyoWordPresswordpress agbajiri njikọ Checkerwordpress pluginnjikwawpmuIhe nlele YouTubeyoutube video
Ntuziaka kachasị na iwuli profaịlụ LinkedIn zuru oke